Inona avy ireo loharanom-pejy tsy vita amin'ny Backlink avy amin'i Backlinko?
Mbola mitohy mitazona ny tontolo dizitaly hatrany ny backlinks, na dia misy lahatsoratra hafa toy ny webmasters aza milaza amintsika zavatra hafa momba azy ireo. Raha ny marina, ny fikarohana farany amin'ny fikarohana fikarohana dia mampiseho fa ny backlinks dia iray amin'ireo hevi-dehibe indrindra ho an'ny Google sy ny karoka hafa.
Raha mikasika ny fananganana rohy, dia misy fomba maro azo atao sy azo atao. Ny sasany amin'izy ireo dia manaraka ny torolàlana Google, raha misy hafa manohitra azy ireo. Amin'izao androntsika izao, ny sasany amin'ireo teknolojia mpamorona rantsana dia tsy dia miteraka firy amin'ny androntsika (f. f. vahiny mamoaka na manohana backlinks). Na dia izany aza dia misy hatrany ny làlana tsy fantatra na ambanin'ny tany ny fomba hahazoana bakalava maimaimpoana maimaim-poana.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hizara teknolojia fananganana rindran-kira maromaro aho, ny sasany amin'izy ireo dia nindramiko avy amin'ny tompony Brian Dean Backlinko. Andeha hojerentsika akaiky ny tsirairay amin'izy ireo.
Fomba hahazoana rindran-damina noho ny fomba fiasa Backlinko
Teknolojia fananganana sosialy
mba hahazoana rohy ivelany avy amin'ny media sosialy. Arak'izany fomba izany dia tsy maintsy mizara votoatin-javatra mifanentana ianao ary mamerina ny votoaty navoaka be. Aorian'izany, mila ampidirin'ireo mpampiasa izay nizara ity votoatiny ity aloha ianao ary manome azy ireo vaovao na vaovao.
Rafitra fananganana ravinkazo
Ity rafitra fanorenana rohy ity dia novolavolain'i Brian Dean. Izany dia nanampy azy hampitombo ny fifamoivoizan'ny organika amin'ny mihoatra ny 400%. Arak'izany fomba izany, mila mamantatra ny fikarohana karazam-pifandraisana ambany kokoa ianao ary mahita ampahany votoaty izay malaza eo amin'ny mpampiasa. Aorian'io, tokony hanoratra tsara kokoa ianao amin'ny teny filamatra. Ataovy azo antoka, ny dikan-teny vaovao momba ny votoaty dia tsy manam-paharoa sy mifototra amin'ny fikarohana. Raha te hamita ity fomba fitantanana rohy ity ianao dia mila mampiroborobo io ampahany vaovao amin'ny fampahalalam-baovao sosialy io miaraka amin'ny tanjona sasantsasany amin'ny sehatry ny PR ianao amin'ny farany izay mampifandray anao.
Fampitandremana mifandraika amin'ny fanorenana teknika
Ny fanomezan-dàlana dia tena ilaina amin'ny orinasa rehetra maneho ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa amin'ny vokatra na tolotra misy orinasa iray. Mitady azy ireo ny webmasters rehefa fantatr'izy ireo ny tombontsoa azon'izy ireo entina any amin'ny magazay an-tserasera. Amin'ny fomba toy izany, ny famoronana ny fijoroana vavolombelona ataonao dia manome fahafahana tena tsara mba hahazoana ny tenanao ho mora fa vao haingana ianao. Ny mpampiasa kokoa dia manintona ireo orinasa izay manana fijoroana vavolombelona biolojika avy amin'ny mpanjifa tena tsara noho ireo tranonkala izay maneho ny tsikera momba ny spammy (toy ny fanamarinana toy izany dia mora hita). Ny fijoroana vavolombelona marina kokoa ny tranonkalanao no nahazoana azy, ny avo kokoa dia hamaritra ny pejy valin'ny fikarohana. Ambonin'izany, toa azo itokisana kokoa ho an'ny orinasa hafa izany. Izany no mahatonga azy ireo hifandray amin'ny tranokalanao na hangataka akory aza.
Ny zavatra rehetra tokony hataonao dia ny misafidy ny vokatra tianao indrindra ary mifandray amin'ny mpamatsy azy mba hanome ny fijoroana vavolombelonao momba izany vokatra manokana. Ny ankamaroan'ny sehatra finday maro dia manana pejy manokana ho an'ity tanjona ity. Izany no mahatonga anao ho mora aminao ny mandefa ny fijoroanao vavolombelona mivantana amin'ny alàlan'ny tranonkala.
Nampidirin'ilay tompon'ny blôgy Backlinko tompony Brian Dean ity teknika fanorenana ity Source .